Fa maninona no mitondra Skype mandrakizay? - Skype
Tena > Skype > Skype tsy tapaka mamaky - ny fomba hiatrehana
Nahoana no Skype pamatrarana mandrakizay?
Raha toa ianao ka miaina olana mifandray amin'nySkype, mankanesa any amin'nySkypePejy misy ny toe-javatra hijerena izay olana misy ankehitriny. Azonao atao koa ny manandrana ireto dingana manaraka ireto hahazoana fanampiana fanampiny: ... Hamarino fa manana ny kinova farany an'nySkype. Zahao ny rindrambaiko fiarovana na fikirakirana Firewall anao hahazoana antoka fa tsy manakana izy ireoSkype.
Salama namana. Androany dia mijery olona tafahitsoka izahay. Amin'ny tranga tampoka.
Niraikitra toy ny gana. Ary tsara vintana ianao. Bu-ha.
Nisy olona vao nanomboka dribbling azy ireo toy izany sy tossing azy ireo amin'ny harona? Izany ve no bullyin 'amin'ny 2019? Tsy maintsy manandrana ny tanàna iray manontolo izahay hamoahana azy. Alao an-tsaina hoe tsy tafiditra amin'ity toe-javatra ity ianao mandritra ny 20-30 minitra, inona no ataonao izao? ara-bakiteny inona no ataonao Ity lehilahy ity toa rain'olona. Ao anaty fitoeram-pako i Dada.
Fa maninona no ao anaty fitoeram-pako ny lohanao? Inona no tianao hatao Raha toa ka nitranga izany dia napetrany tao anaty fitoeram-pako ho an'ny daholobe ny lohany ary avy eo nirodana niaraka taminy. Misy olona manipy pizza? Misy sombin eto, manotrika, tsara kokoa aoka aho sniff (sniffing feo) Ataovy ny lohany amin'ny dabam-pako. Mendrika izany ianao.
Toy ny teny an-dalana ho any Golf, dia mitaky ny fanatanjahan-tena. Eny na inona na inona lazain'ny afa-po tahaka ny lohany ao anaty dabam-pako, tsy huhOh (fihomehezana) Boody olana toy ny rehefa mieritreritra ianao maimbo ampy natsipy mifanaraka ny tsorakazo ary avy eo mahazo Foana ny vatana, fantatro fa fihetseham-po, izay efa natao, yaknow indraindray ny vatana matavy loatra fotsiny
Nahoana aho no tsy maintsy sonia ao amin'ny Skype fotoana rehetra?
lany androSkypedikan na mpanao kolikoly fampiharana antontan-kevitra dia mety hanery ny fampiharana ho foanaSignmivoaka ianao. Raha vao nanova ny tenimiafinao kaonty Microsoft ianao,SkypeMEYeFAolana amin'ny fanavaozana ny vaovao.Feb 3 2021
- Hey, sefo? Efa niresaka izahay ary mahatsapa toy ny afaka miverina foana izany amin'ny manaraka daty, fantatrao, raha tsy maintsy. - Fa maninona no tokony hataontsika izany? Antsika ny fakantsary. Manana ny Studio.
Isika manao ny fisondrotana noho ny Skype, sa tsy izany? - Marina, eny, marina - Ka ataontsika izany. - Eny ary, eny - Ny orinasa mila fisondrotana, sa tsy izany? - Azo antoka, eny. Izay no mahatonga anay eto. - Don look Aza mifandray amiko.
Salama Amerika. Izaho no CEO an'ny Skype, Landon Bablandananavan. Herintaona mahery izay no lasa hatramin'ny nanoratana ny tranga voalohany an'ny COVID-19 tany Amerika.
Conference tolotra ho ny ain'ny ny fiaraha-monina. Te-hiteny amin'ny faran'ny foko fotsiny aho ho an'izay rehetra mahita an'io, manadala anao! Ary ny roa-asitriho any ny adala kaonty Zoom faharoa. Inona ny milay no Zoom? Inona no atao hoe zoom? Inona ity? Efa teto am-piandohana izahay ary tsy azonao lazaina amiko fa tsy mahalala Pooh daholo ireo olona ireo. vao niverina ho amin'ny fuck amiko.
Amin'ny maha Andriamanitra vavolom-belona ahy, ianao tsy misaotra, ianao no hamaly faty! Skype dia teo am-piandohana, nanome anao antso an-tsoratra alohan'ny hahafantaranao fa tianao izany. Ary raha vao haingana ianao no tsy nampiasa Skype noho ny antony, iza no mahalala inona? Fantatrao fa manana ny zavatra rehetra ilainao izahay, toy ny fiaviana mahazatra. Okay? Ary bokotra ahantona, mahazoa izany, zoro hafa! Ooh! Satria mazava ho azy fa mpandika fifanarahana tena izy io ho an'ny sasany aminareo.
Izay no hevi-dehibe ao aminy. Tsy maintsy atao izany satria raha tsy izany, maninona ianao no manadala anay amin'ny boriky toy izany? Ry menarana tsy mivadika! Milamina fotsiny. Milamina fotsiny.
Efa efa nampiasa ho toy ny matoanteny amin'ny Skype. Fantatrao ve ny halehiben'ny dingana lehibe iray? rehefa lasa teny tokoa ny anaran'ny orinasa? Tsy mitady zavatra ny olona. Google azy ireo ianao.
Skyped ianao. Izany no lalao baolina kitra iray manontolo, zazakely. Izany no satroboninahitra eo am-pelatananao.
Nanana ny fampiharana anay tamin'ny findainao ianao. Ianao nanana ny anarany ao am-bavanao. Izahay teo am-tsipika fahatongavana ary avy eo dia namboly ny atrehinay.
Inona no manao ratsy? Inona no azon'ny Zoom atao izay tsy hain'ny Skype? - Eny ary, Zoom dia afaka hanohana hatramin'ny arivo mpiantso - arivo? Nahoana ianao no tokony hiresaka ny arivo ny olona an-telefaonina? Tsy mahalala olona arivo aho, fa tsy hiteny amin'izy ireo. Izay aho nanao hoe: Skype dia hoe mbola manana ny lahatsoratra fitaovana ho an'ny rehetra ny zavatra ilaina. Maninona no milamina amin'ny zavatra hafa raha afaka manana ny tena izy ianao? Fa maninona no marina? Nahoana ianao no tokony Nahoana? Izahay ao amin'ny Skype dia ho eo foana hanome anao ireo fitaovana ilainao. - Okay, tsara izany.
Afaka manandrana an'izay lehilahy tsy mamiratra kely angamba? - No. amin'ny Skype isika dia ho eo foana ho anao hanome anao ny fitaovana tokony hoe mahomby na tafita na dia mitete toy ny mafana izahay kitapo ny diky ho an'ny tanora tsara tarehy zavatra fotsiny ary nandehandeha tao. Ooh, Zoom aho! Ianao Leonardo DiCaprio-ed us! Nataonao izany! Bunch of DiCaprios! DiCaprio! DiCaprio! Hydrox dia tonga talohan'i Oreos.
Fantatrao ve izany? Hydrox dia tonga talohan'ny Oreos.Betamax dia tonga talohan'ny VHS .Gobots dia tonga talohan'ny Transformers.
Gobots ve isika? vonona. Ka ady io. Tsy mandeha amin'ny arabe ianao ary mandrora amin'ny mason'ny lehilahy ary tsy manantena azy hianjera avy eny amin'ny valindrihana ao amin'ny efitranonao ao afovoan'ny alina ary hanapaka ny tendanao fandrahonana, ara-dalàna! Hitako ato amiko ny mamela anao.
Raha lasa ianao dia afaka miverina. Tsy misy fanontaniana nanontany. Ary ho anao izay tsy nandao velively, misaotra.
kilemaina ny fanampiana roa tonta
Faly be izahay fa manana anao ary faly be izahay milaza fa valianay valisoa ho anao, hikatona eo noho eo ny fijanonanao ary manomboka mivarotra tee-shirt. Hitanao ve ny mahalasa saina azy? Hamadika anao tsy ho aiza? Mahatsiaro ahoana ianao? DiCaprio! DiCaprio! Fantatrao, hafahafa ny nandefasan'ny reniko mailaka kely ny andro hafa izay nilaza fa tokony hanangana zoom ho an'ny fianakaviana izahay. Ny mamako.
Salama, ny anarako dia Landon Bablandananavan ho faty aho. Ary izao dia te-hanao zezika ny olona. Tsy maintsy manao zoom aho! Oh, Mila hanao zoom in, dadatoako manadio ny garazy faran'ny herinandro ity.
Ary manana Microsoft izahay izao. Hofafan'izy ireo izahay! Nandeha niaraka tamin'ny Microsoft Teams izahay izao. Mbola ratsy kokoa noho ny Zoom aza izany! Ekipa! Mila manao orthodontist ho an'ny ekipa olon-dehibe ampiakariko aho.
Raha azonao atao ny mametaka ny namanao mafana! Skype toa mahatahotra. Toa ny manokatra kapoaka. Skype.
Mamelà ahy ianareo zoom in. Misy izany azo ampiasaina? - Oh, tsy fantatro. - Okay.
Ampahafantaro ahy. Azontsika atao ny manao zoom avy eo. Lele! Skype! Skype, Skype, Skype! Mahafinaritra fotsiny ny miteny.
Ahoana no ahafahanao mamoaka ny Skype?
(Na mety fotsiny tsindrio Ctrl Alt Esc amin'ny solosaina, ClickSkypeary avy eo dia tsindrio End Task) eo amin'ny keyboard, tsindrio ny Windows manan-danja sy manan-danja R niara-.3 Oktobra 2017
nanjavona ny gadget famantaranandro
Ahoana no fomba hanova ny fomba fijery eo amin'ny Skype?
Ahoana no mifamadika hevitra nandritra nySkypeAntso an-tsary?
Tsindrio ny bokotra fampandehanana antso.
Raha hanova ny fomba fijery dia safidio na Gridfahitana, Mpampiresakafahitana, Mode miaraka, na ny kofehy lehibefahitana.
Ireto ny torohevitra sy tetika Skype 10 tsara indrindra ho an'ny orinasa. Tongasoa eto amin'ny Sele Training. Izaho dia Jason Sele.
Skype for Business dia fitaovana lehibe iray tsy tokony hafangaro amin'ny Skype Personal Edition. Ny Business Edition dia natao ho an'ny tontolon'ny orinasa ary manana endriny misimisy kokoa. Ireto misy torohevitra sy tetika vitsivitsy hampiasana ny Skype for Business ho anao.
Number1 - Mamorona fivoriana Skype ao amin'ny Outlook. Ny Skype for Business dia mifandray amin'i Outlook. Ny sisa ataonao dia tsindrio ny fivoriana Skype vaovao rehefa eo amin'ny kalandrie ianao.
Skype dia mametraka ny nomeraon-dial anao ary rohy mankany amin'ny fivorian'ny Skype anao. Ataovy ao anaty ny To :, ampidiro ny laharam-pianaranao ary tsindrio Send.Number 2 - Raketo fivoriana amin'ny 1080p HD.
Raha vantany vao nanomboka fivoriana Skype ianao dia azonao atao ny manindry ny teboka dot-dot eo amin'ny zoro ambany ambany ary manomboka manoratra. Ity dia hanoratra ny fihaonanao amin'ny 720p. Raha te hametraka vahaolana avo lenta ao amin'ny sehatr'asa Skype ianao, kitiho ny Record ary zahao ity toerana feno 1080p HD ity.
Isa 3 - Zaraina fisie rakitra PowerPoint. Ny fomba tsara indrindra hizarana rakitra PowerPoint lehibe ao amin'ny Skype for Business dia ny mampakatra azy amin'ny rahona. Tsindrio Hizara ny atiny.
Safidio ny fizarana rakitra PowerPoint. Safidio ny rakitra PowerPoint anao ary hampakatra azy amin'ny rahona. Ankehitriny ity antontan-taratasy ity dia afaka jeren'ny olon-kafa nefa tsy miandry ny apetrak'ireo rakitrao.
Raha vantany vao napetrakao io dia kitiho indray ny bokotra Share Content ary afaka mankany ManageContent ianao ary mifehy ny fikirana ho an'ny fisie. Esory, sakano, ataovy misy ny olona sasany sy ny toerana hafa. Laharana 4 - Fanavaozana mandeha ho azy ny fampahalalana momba ny fisian'ny kalandrie.
Ao amin'ny sehatr'asa Skype for Business eo ambanin'ny Personal, ampandehano ity mari-pamantarana ity ho 'Fanavaozana ny fisiako mifototra amin'ny fampahalalana momba ny kalandrie'. Hanavao ny fifandraisana aminao izany ary hampandre anao rehefa mivory ianao. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny boaty boaty hizarana an'ity fampahalalana ity amin'ny olona tsy miankina na amin'ny daholobe.
Laharana 5 - apetraka aza manelingelina amin'ny fivoriana. Eo ambanin'ny sehatry ny Skype for Business. Rehefa mifamadika amin'ny satany ianao dia misy safidy eto hanehoana ahy fa aza manelingelina.
Rehefa mizara ny birao misy ahy aho dia ampiasao izany hampandre ny olona fa ao am-pivoriana ianao ary tsy te-hahazo antso an-tariby na hafatra eo noho eo. Isa 6 - avelao ny fifandraisana ivelany. Ao amin'ny foibem-pikarakaranao Office 365, kitiho ny Skype for Business.
Eo ambanin'ny fikambanana, kitiho ny fifandraisana ivelany. Raha misafidy ity boaty fanamarinana ity ianao dia ho afaka hampiasa Skype for Business ny mpampiasa hifandraisany amin'ireo mpampiasa Skype ivelan'ny fikambanana misy anao. Io dia ahafahanao mandray sy mandefa hafatra eo noho eo Skype amin'ny olona ivelan'ny tamba-jotra anatiny.
Amin'ny alàlan'ny default, ity dia alefa afa-tsy ireo domains voasakana ary eto ambany ianao dia afaka manampy domains tianao hakatona amin'ny serasera. Isa 7 - manamboatra ny fanasana fivoriana. Amin'ny faritra iray ihany ao amin'ny foibe fitantanana ny Skype dia misy vakizoro ho an'ny fivoriana an-tserasera.
Eto no ahafahanao manitsy ny fanasana amin'ny fivorianao. Afaka mamorona sary famantarana ianao, afaka manampy url amin'ny rakitra fanampiana, afaka mampiditra url ara-dalàna ihany koa ary mamorona lahatsoratra an-tongotra izay hiseho amin'ny faran'ny fivoriana Skype. Ity fampahalalana ity dia hiseho eo anelanelan'ireto tsipika roa ireto amin'ny fanasana fivoriana ataonao.
Laharana 8 - zahao ny solaoro fitenin'ny kalitaon'ny antso. Endri-javatra mahasoa iray hafa ao amin'ny foiben'ny admin Skype dia ny dashboard kalitaon'ny antso. Azonao atao ny miditra amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny Tools, kitiho ny Skype for Business Online Call Quality Dashboard.
Ny dashboard kalitaon'ny kalitao dia ilaina ihany raha nampifandray ny fampiasa finday Skype ao amin'ny tontolo Skype for Business ianao. Mampiseho ny sary momba ny asan'ny antso an-telefaoninao ary na tsara, ratsy na tsy voasokajy ny kalitaony. Mampiseho anao ny fironana isam-bolana sy isan'andro ary manome anao hevitra tsara ny isan'ny antso an-tariby ao amin'ny tambajotrao ary raha ampy ny kalitao.
Raha mahita faritra midadasika misy fifandraisana ratsy ianao, dia famantarana izany fa misy zavatra tsy mety amin'ny tambajotrao na misy zavatra manohina ny fifandraisanao amin'ny Internet. Isa 9 - Manampia nomeraon-telefaona finday sy telefaona an-trano. Ao amin'ny sehatr'asa Skype eo ambanin'ny telefaona dia misy nomeraon-telefaona maromaro azonao idirana.
Matetika, ny fampahalalana dia misy avy amin'ny Office 365 na Exchange, fa raha tsy eo izy dia azonao atao ny mametaka azy ao anaty ao aminao. Ampio ny nomeraon-telefaoninao, ny tranoo, na ny nomeraon-telefaonanao hafa ary ataovy azon'ny olon-kafa amin'ny karatra fifandraisana mampiseho ny mombamomba anao. Ary farany isa 10 - safidy amin'ny fivoriana.
Raha mila fivoriana Skype mahomby ianao dia kitiho ny safidin'ny fivoriana amin'ny fidirana kalandrie. Eo ambanin'ny fahazoan-dàlana dia afaka misafidy izay tianao hiandrasana ao amin'ny lobby ianao. Raha apetrakao ny 'Izaho irery, mpikarakara ny fivoriana', ny olon-drehetra dia hiandry ao amin'ny lobby hanombohanao ny fivorianao.
Ny fialana 'rehetra' dia midika hoe afaka mifandray amin'ny fivoriana ny olona rehetra nefa tsy mila miandry ao amin'ny lobby. Azonao atao ihany koa ny misafidy izay hanao ny mpanolotra. Raha ianao irery no manome famelabelaran-kevitra dia tokony apetrakao ny 'Just me' mba tsy hanadinan'ny olon-kafa ny fivorianao amin'ny alàlan'ny fanolorana ny birao misy anao eo amboninao ary vonona ny hifindra eo anelanelan'ny efijery samihafa ianao te-hiova.
Azonao atao ihany koa ny mahatadidy ireo toe-javatra ireo mba hahafahan'ny fivoriana manaraka amboarinao hanana ny toeranao. Io no famaranana ireo torohevitra sy tetika Skype 10 ambony ho an'ny orinasa. Manantena aho fa hitanao fa mahasoa ity fampahalalana ity.
Hey, raha te-hahita lahatsoratra misimisy kokoa ianao azafady, misoratra anarana ary raha tianao ity lahatsoratra ity, tsindrio ny ankihiben-tànana ary mamela hevitra. Tena ankasitrahako ny fanohananao!
Nahoana no tsy Skype manomboka rehefa miditra?
Ny dingana SkypeHost.exe mety hanomboka indray ianao, rehefa miverina miditra any Windows rehefa avy reboot, fa ny fandaharana dia tsy miditra ianao satria tafiditra ao ny fotoana farany no nampiasa azy io. Raha nametraka ny programa Skype mahazatra ao amin'ny Windows 10 na Windows 8 (amin'ny alàlan'ny Skype.com) ianao dia sokafy ny fisehony mba tsy hanajanonana ilay endri-panombohana mandeha ho azy.
fidirana amin'ny layout
Ahoana no ahafahako manakana ny Skype tsy hanomboka amin'ny solosaina?
Raha mampiasa Skype for Business amin'ny solo-sainanao ianao dia azonao atao ny mampiasa ireto dingana manaraka ireto hanakanana an'ity kinova Skype ity tsy hanomboka ho azy ao amin'ny Windows 10 Computer anao. 1. Tsindrio ny bokotra Start Windows 10 ary avy eo dia tsindrio eo amin'ny Skype Fa Business App.
Fa maninona no maharitra fotoana maharitra ny Skype amin'ny famoahana PowerPoint?
Ny fifamoivoizana Skype rehetra dia tsara avokoa, tsy misy fanemorana lehibe eo amin'ny birao horonan-tsary / audio / fizarana / whiteboard / poll, slide PowerPoint fotsiny. Tsy toy ny tsy miasa mihitsy izay mety ho mora kokoa ny troubleshoot, dia lavitra loatra fotsiny maka ela. I homarinana avy amin'ny teny spec ny WAC serveur, upped RAM ho 16Mb (na dia ny mavitrika) nefa tsy misy fiovana hita maso.
Inona no mitranga rehefa miala amin'ny app Skype aho?
Mivoaha eo am-baravarankely Skype. Raha ny mahazatra, rehefa avelanao hisokatra ny Skype ary miditra ianao, SkypeApp.exe dia miasa ao amin'ny Task Manager. Rehefa manidy ny fampiharana ianao nefa tsy mivoaka, dia mijanona hatrany mba hahafahanao mahazo fampandrenesana.